Genesis 37 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
37 Ke kaloku uYakobi wahlala ezweni lokuphambukela kukayise,+ ezweni lakwaKanan.+ 2 Yiyo le ke imbali kaYakobi. UYosefu,+ xa wayeneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala, wayesalusa umhlambi wezimvu+ kunye nabantakwabo, yaye, ekubeni wayeseyinkwenkwana, wayekunye noonyana bakaBhiliha+ noonyana bakaZilipa,+ abafazi bakayise. Ngoko uYosefu wazisa ingxelo embi ngabo kuyise.+ 3 Yaye uSirayeli wayemthanda uYosefu ngaphezu kwabo bonke abanye oonyana bakhe,+ kuba wayengunyana wasebudaleni bakhe; waza ke wamenzela isambatho eside, esinjengehempe nesinemigca.+ 4 Bakubona abantakwabo ukuba uyise wayemthanda ngaphezu kwabo bonke abantakwabo, bamthiya,+ baza ababa sathetha ngoxolo naye.+ 5 Kamva uYosefu waphupha waza wabaxelela abantakwabo,+ baza bafumana isizathu esingakumbi sokumthiya. 6 Wathi kubo: “Ncedani, niliphulaphule eli phupha ndiliphuphileyo.+ 7 Yabonani, besibopha izithungu phakathi entsimini, sasuka isithungu sam sema nkqo, zaza ezenu izithungu zasirhangqa, zaqubuda kwisithungu sam.”+ 8 Baza bathi abantakwabo kuye: “Ngaba ngokuqinisekileyo uza kuba ngukumkani wethu?+ okanye, Ngaba ngokuqinisekileyo uza kusilawula?”+ Ngoko bafumana isizathu esitsha sokumthiya ngenxa yamaphupha akhe nangenxa yamazwi akhe. 9 Emva koko waphupha elinye iphupha, waza wabalisela abantakwabo esithi: “Yabonani, ndiphinde ndaphupha kwakhona, ndiphuphe ilanga nenyanga neenkwenkwezi ezilishumi elinanye ziqubuda kum.”+ 10 Watsho ebalisela uyise kwanabantakwabo, waza uyise wamkhalimela wathi kuye:+ “Liphupha lini na eli uliphuphileyo? Ngaba ngokuqinisekileyo mna kwanonyoko nabantakwenu soza siqubude kuwe na emhlabeni?” 11 Bamkhweletela+ ke abantakwabo, kodwa yena uyise waligcina elo lizwi.+ 12 Ke kaloku abantakwabo baya kwalusa umhlambi kayise kufuphi nakwaShekem.+ 13 Ethubeni uSirayeli wathi kuYosefu: “Abantakwenu balusa imihlambi kufuphi nakwaShekem, akunjalo na? Yiza, ndikuthume kubo.” Wathi yena kuye: “Ndilapha!”+ 14 Ngoko wathi kuye: “Nceda, undiyele khona. Ubone ukuba abantakwenu basaphila na, nokuba umhlambi usaphila na, uze ubuye undazise.”+ Wamndulula ke esuka entilini yaseHebron,+ waya ngakwaShekem. 15 Kamva wafunyanwa yindoda ethile ebhadula endle. Yaza yambuza indoda leyo, isithi: “Ufuna ntoni na?” 16 Wathi: “Ndifuna abantakwethu. Khawuncede undixelele, bayalusela phi na imihlambi?” 17 Yaqhubeka le ndoda yathi: “Bandulukile apha, kuba ndibave besithi, ‘Masiye eDotan.’” Ngoko uYosefu wabalandela abantakwabo waza wabafumana eDotan. 18 Bambona ke esemgama, yaye ngaphambi kokuba asondele kubo benza iyelenqe lokumbulala ngobuqhokolo.+ 19 Ngoko bathi omnye komnye: “Khangela! Nankuya esiza laa mphuphi.+ 20 Yizani ke ngoko simbulale size simphose komnye wale mihadi yamanzi;+ sithi uqwengwe+ lirhamncwa elikhohlakeleyo. Sibone ke ukuba aya kuphelela phi na loo maphupha akhe.” 21 Akukuva oku uRubhen wazama ukumhlangula esandleni sabo.+ Ngoko wathi: “Masingawubethi siwubulale umphefumlo wakhe.”+ 22 Waqhubeka uRubhen esithi kubo: “Musani ukuphalaza gazi.+ Mphoseni kulo mhadi wamanzi usentlango, ningasi sandla ngokunogonyamelo kuye.”+ Injongo yakhe yayikukumhlangula esandleni sabo ukuze ambuyisele kuyise. 23 Kwathi nje akufika uYosefu kubantakwabo, bamhluba uYosefu isambatho sakhe eside, nesambatho eside esinemigca awayesinxibile;+ 24 emva koko bamthabatha baza bamphosa emhadini wamanzi.+ Ngelo xesha umhadi lowo wawungenanto; kwakungekho manzi kuwo. 25 Bandula ke bahlala phantsi ukuze badle isonka.+ Xa baphakamisa amehlo abo, bakhangela, babona umkhoko wamaIshmayeli+ owawuvela eGiliyadi, yaye iinkamela zawo zazithwele intlaka emhlophe nebhalsam nentlaka emnandi,+ usendleleni eya kuzothula eYiputa. 26 Wathi ke uYuda kubantakwabo: “Kunangenelo yiphi na ukumbulala umntakwethu, size siligqumelele igazi lakhe?+ 27 Yizani sithengise ngaye kumaIshmayeli,+ isandla sethu singabi phezu kwakhe.+ Ngapha koko, ungumntakwethu, inyama yethu.” Ngoko bamphulaphula umntakwabo.+ 28 Adlula ke loo madoda amaMidiyan,+ awayengabarhwebi. Ngoko ke bamtsala baza bamnyusa uYosefu emhadini wamanzi,+ bamthengisa uYosefu kumaIshmayeli ngamaqhosha esilivere angamashumi amabini.+ Wona ke amsa uYosefu eYiputa. 29 Kamva uRubhen wabuyela emhadini wamanzi waza wabona engasekho uYosefu emhadini lowo wamanzi. Ngoko ke wazikrazula izambatho zakhe.+ 30 Akubuyela kwabanye abantakwabo wadanduluka wathi: “Umntwana akakho! Mna ke—ndosuka ndiye ngaphi na?”+ 31 Noko ke, basithabatha isambatho eside sikaYosefu, baxhela inkunzi yebhokhwe baza basithi nkxu ngokuphindaphindiweyo isambatho eside egazini.+ 32 Emva koko basithumela isambatho eside esinemigca, basisa kuyise baza bathi: “Sifumene oku. Nceda, uhlolisise+ enoba sisambatho eside sonyana wakho okanye ayisiso kusini na.”+ 33 Wasihlolisisa waza wadanduluka wathi: “Sisambatho eside sonyana wam! Umele ukuba uqwengwe lirhamncwa elikhohlakeleyo!+ Ngokuqinisekileyo uYosefu uqwengiwe!”+ 34 Wasuka uYakobi wazikrazula iingubo zakhe zokwaleka, wabhinqa irhonya esinqeni sakhe waza waqhubeka emzilele unyana wakhe iintsuku ezininzi.+ 35 Babemthuthuzela+ bonke oonyana bakhe nazo zonke iintombi zakhe, kodwa wayengavumi ukuthuthuzeleka, esithi:+ “Ndakude ndihle ndiye kunyana wam eShiyol ndisazilile!” Waqhubeka ke uyise emlilela. 36 Noko ke, amaMidiyan amthengisa eYiputa kuPotifare igosa lenkundla likaFaro,+ intloko yamafanankosi.+